နေ့အပူချိန်မြင့်တက်နေမှုကြောင့် မင်းကင်းထွက် ရိုးရာသောက်ရေအိုးများ အရောင်းအဝယ် သွက်နေ - Yangon Media Group
နေ့အပူချိန်မြင့်တက်နေမှုကြောင့် မင်းကင်းထွက် ရိုးရာသောက်ရေအိုးများ အရောင်းအဝယ် သွက်နေ
မင်းကင်း၊ မေ ၄
ချင်းတွင်းမြစ်ရိုးအထက်ပိုင်း ကလေး၊ ကလေးဝ၊ မင်းကင်း၊ တမူးဒေသများတွင် သင်္ကြန်ပြီးကာလမှအစပြု၍ နေ့အပူချိန် မြင့်တက်နေသည့်အတွက် မင်းကင်းမြို့နယ် ဘိုင်ရွာထွက်မြေသောက်ရေ အိုးများ အရောင်းအဝယ်သွက်လျက်ရှိကြောင်း မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် တမူးမြို့ဈေးကွက်မှ သိရသည်။ အဆိုပါဒေသများတွင် အပူချိန်(၄ဝ) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့်(၄ဝ) အထက်ထိရှိနေရာ အပူချိန်မြင့်တက်လာချိန် သဘာဝရေအေးသောက် သုံးနိုင်ရန် ဘိုင်မြေအိုးများ ဝယ်ယူသုံးစွဲမှုများနေခြင်းဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့ မင်းကင်းမြို့နယ် ဘိုင်၊ ဗဒက်၊ ကုန်းရင်း၊ ပန်းဆက် ရွာတွေမှာ ရှေးကာလကစတင်ပြီးတော့ အိုးလုပ်ငန်းကို တစ်ရွာလုံးနီးပါး လုပ်ကိုင်ပါတယ်၊၊ အခုတော့ အိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ရာချီရှိပါတယ်၊ ရွာကထွက်တဲ့အိုးအားလုံးကို ချင်းတွင်းအထက်ပိုင်း မော်လိုက်၊ ဖောင်း ပြင်၊ ဟုမ္မလင်း၊ ခန္တီးအထိတင်ပို့ပါတယ်။ နောက် ကလေးဝ၊ ကလေး၊ မင်းကင်း၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် တမူးနယ်စပ်ဈေးအထိ တင်ပို့ပါတယ်။ တစ်ဖက်အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကသည်းတွေကလည်း ဝယ်ယူမှုရှိပါတယ်။ အခု နှစ်အရောင်းအဝယ်က နှစ်တိုင်းထက်ပိုကောင်းပါတယ်” ဟု ကုန်းရင်း ရွာမှ အိုးအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ဦးမြတ်လေးက ပြောသည်။
မင်းကင်းမြို့နယ် ဘိုင်၊ ဗဒက်၊ ကုန်းရင်းအစရှိသည့်မြို့များမှ ထွက် ရှိသော ညောင်ရေအိုး၊ ပရိတ်အိုး၊ အတာအိုး၊ သောက်ရေအိုး၊ ရေ လှောင်အိုးတို့ကို ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းအတိုင်း စက်လှေဖြင့် ရွာစဉ် ထိုးအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ကြပြီး မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် တမူးနယ်စပ် ဈေးသို့ ကားဖြင့်တင်ပို့ရောင်းချကြောင်း သိရသည်။ ယခုရက်ပိုင်း ပုံမှန်သောက်ရေအိုးတစ်လုံးလျှင် ကျပ် ၃ဝဝဝ မှ ကျပ် ၄ဝဝဝ အထိ၊ သောက်ရေအိုးအကြီး၊ ရေလှောင်အိုးအကြီးတစ်အိုးလျှင် ကျပ် ၅ဝဝဝ မှကျပ် ၁ဝဝဝဝ အထိ၊ ဘုရားညောင်ရေအိုးတစ်လုံးအကြီး လျှင် ကျပ် ၂ဝဝဝ အသေး ကျပ် ၁ဝဝဝ နှင့်ပရိတ်အိုး၊ အတာအိုးတစ်လုံး လျှင် ကျပ် ၁၅ဝဝ မှ ကျပ် ၂ဝဝဝ အထိအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မော်လမြိုင် - သံဖြူဇရပ် (BOT) စနစ်လမ်းပိုင်းအား ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် အဖွဲ့အစည်းတို့မှ စိစစ်ပြီး
ညောင်ဦးမြို့နယ်တွင် နွားစာဝယ်သူများသည့် အတွက် နွားစာ ဈေးကောင်းပေးဝယ် ကျွေးနေကြရ
ကော်မရှင်သစ် သက်တမ်း အတွင်း အဂတိဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုနှင့် အရေးယူမှု ယခင်နှစ် ကာလတူထက် ငါးဆကေ?
ယူနက်စကို အသိအမှတ်ပြု ကုသိုလ်တော် ဘုရား တောင်ဘက် အပေါက်ရှိ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး ကြေးရုပ်??
လာမယ့်နှစ်မှာ ဒုတိယမြောက် ရင်သွေး မီးဖွားမယ့် ချားလ်တွီဒီ
နေပြည်တော်ကို Entertainment City အဖြစ် ဖော်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြန်ကြားရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြော